Habka Ninka Guriga Xiliga 3
Leave a Comment Jidka Ninka Guriga Xiliga 3 Taariikhda Siideynta
Habka ninka gurigu waa a Qayb Nolosha Anime kaas oo asal ahaan soo baxay April 8, 2021 Naadi. Waxay raacdaa nin lagu magacaabo Tatsu, kaas oo, ka dib nolol dheer oo dembi ah, wuxuu go'aansaday inuu u yeero joojinta oo uu nolol xasilloon kula noolaado lammaanihiisa. Habka Husband Season 3 waa wax ay taageerayaashu rajeynayaan. Markaa ma dhici doontaa?
Dulmar - Habka Ninka Guriga
Nuxurka sheekadu waa taas Tatsu wuxuu sii wadaa inuu dhibaatooyin kala kulmo xubnaha gangkiisii ​​hore. Tani waxay soo kordhinaysaa sheekoyin badan oo kala duwan si ay sheekadu hoos ugu dhacdo waxaanan helaynaa waqtiyo badan oo qosol iyo xiiso leh oo taxane ah oo sii socda. The Naadi fikradayda waxay ahayd sheeko aad u fiican, wada-hadalkuna wuxuu ahaa mid aad u qosol badan. Sawirka The Habka Ninka Guriga lagu tiriyaa Kousuke Oono.
Tatsu ayaa kor u qaaday bisad iyada oo xaaskiisa ay telefoonka ku jirto.
Isagoo la tacaalaya asxaabtiisii ​​hore, waxaa sidoo kale laga filayaa inuu ku daryeelo shaqada guriga ee meesha ay ku nool yihiin. Hawlahani waxay mararka qaarkood ku adkaan karaan Tatsu, kaas oo si dhab ah u qaata dhammaan hawlaha. Waxaad qiyaasi kartaa in tani ay ka dhigayso Anime qurux badan oo lagu raaxaysan karo, taageere kastana waxa ay rajeynayaan Habka Husband Season 3.
Dhamaadka Jidka Ninka Guriga
Sheekadu waxay ku dhamaanaysaa inta badan Tatsu oo dejinaya xafiiltankiisa mid ka mid ah kuwiisii ​​hore yakuza (Waxaan u malaynayaa) saaxiibada isticmaalaya tartanka cunto karinta. Inkastoo ay Naadi Dhammaadkii gabi ahaanba ma ahayn mid dhamaystiran. Waxa jiray dhamaad badan oo aan la xidhin oo aan qaybtooda laga hadlin qaybtii ugu dambaysay ee xilli ciyaareedkii labaad Habka Ninka Guriga. Dhibaatooyinkan aan la hubin iyo kuwa aan la soo afjarin waxaa hubaal ah in lagu xalin doono Habka Husband Season 3.
Hadda waxaan qirayaa in dhamaadka runtii aysan ahayn wax gaar ah, waxaan arkay qaab aad u hooseeya oo Anime ah oo leh nooc ka sii wanaagsan oo dhamaadka ah marka loo eego waxa nala siiyay Habka Ninka Guriga. Waxaan rajeynayaa, xilli 3 ee ah Habka Ninka Guriga waxay ina siinaysaa aragti dheeraad ah Tatsuxafiiltanka iyo wax badan oo ku saabsan noloshiisii ​​hore.
Habka Ninka Guriga Xiliga 3 Suurtagal ma yahay?
Habka Guriga Hudband Season 2 ayaa la sii daayay Netflix on October 7, 2021. Si kastaba ha ahaatee, qaybta labaad waxay ka kooban tahay 5 qaybood oo keliya oo dhererkoodu yahay 17-19 daqiiqo. Tani aad ayay iigu yaab badan tahay, oo waxay iga cadhaysiisay xoogaa.
Ilaa hadda sida caanka ah Qayb Anime ah Waxay ka welwelsan tahay, Habka Ninka Guriga Xiliga 3 weli ma shaacin JCStaff ama Netflix.
Aynu eegno dib u eegista xilli ciyaareedka ugu horreeya. Waxay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan oo soo jiidasho leh. Dadku waxay u muuqdaan inay sidan jecel yihiin Naadi. Hadda, ka dib markii daawashada xilli ciyaareedkii labaad ee Naadi, Waxaan odhan lahaa tani waxay sidoo kale noqon doontaa kiiska Habka Husband Season 3.
Sidoo kale tan waxaan u maleynayaa inay caqli badan tahay in la tilmaamo xaqiiqda ah in Netflix uu aad iyo aad ugu sii socday booska Anime. Waxay noqonaysay mid aad u cad sida Netflix koriyo Naadi maktabad weligeed ah.
Iyadoo la sii daayo sida Komi Ma xiriiri karto (taas oo ah a Netflix Asalka), iyo Xilliga Buluugga ah waa iska cadahay in meeshani tahay aag taas Netflix wuxuu damacsan yahay inuu ku fido.
Goorma ayaa Dariiqa Husband Season 3 la sii deyn doonaa?
Anigoo maskaxda ku haya wixii aan hore u idhi, anigu shakhsiyan ayaan sidaas odhan lahaa Habka Ninka Guriga ayaa lagu wadaa in dib loo cusboonaysiiyo. Tani waa hubaal. Isticmaalka macquulka fudud waxaan go'aamin karnaa in haddii uu jiro Xiliga 3aad, ay u badan tahay in lagu sii daayo 2022 laga yaabaa in rubuca 3aad? Aad uma hubo taas laakiin waxaan aaminsanahay inay aad ugu badan tahay.
Xaqiiqdi ma jirto rajo ah in la helo Xiliga 3 dhamaadka sanadka. Si kastaba ha ahaatee, ma noqon doonto mid aad u badan in la yiraahdo waxay iman doontaa horaantii sanadka soo socda. Waad ku mahadsan tahay akhrinta, fadlan is diiwaan geli si aad u hesho dhammaan kaaga Muuqaalka Cradle wararka emailka hoose
Isdiiwaangeli si aad u hesho warar badan
Iibso Cradle View badeecada rasmiga ah
Gelitaan Hore Weerarkii Titan Season 3 ee dhammaanaya waa qurux
Gelitaanka Xiga Kiyotaka Ayanokōji - Xogta Dabeecada